China Carbon Heater Film ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |Xinhui
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် ရေတိုင်ကီများ၊ လေအေးပေးစက်များနှင့် ရေတိုင်ကီများမှ ကိုယ်စားပြုသည့် အချက်ပြအပူပေးစနစ်နှင့် အပူကေဘယ်ကြိုးများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် လိုင်းအပူပေးစနစ်နှင့် ကွဲပြားသည်။၎င်းသည် မျက်နှာပြင်အပူပေးသည့်နေရာတွင် ခေတ်မီအာကာသနည်းပညာဖြင့် တီထွင်ထားသော ကာဗွန်နည်းသော အပူပေးစနစ်ဖြစ်သည်။နည်းပညာမြင့်အပူပေးသည့်ပစ္စည်းများ။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် ရုပ်ရှင်အကြောင်း မိတ်ဆက်
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် စွမ်းအင်ထုတ်ပြီးနောက် အပူကိုထုတ်ပေးနိုင်သော တောက်ပသော polyester ဖလင်တစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းကို Polyester ရုပ်ရှင်များကြားတွင် လျှပ်ကူးနိုင်သော အထူးမင်နှင့် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ပူပူနွေးနွေး နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။အလုပ်လုပ်သောအခါတွင်၊ ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို အပူဒြပ်စင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး အပူကို ဓာတ်ရောင်ခြည်အသွင်ဖြင့် အာကာသထဲသို့ ပို့လွှတ်လိုက်သောကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အရာဝတ္ထုများကို ဦးစွာပူနွေးလာစေရန်၊ ၎င်း၏ အလုံးစုံအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ထက်မြတ်သည်။ ရိုးရာ convection အပူနည်းလမ်း။အပူချိန်နည်းသော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုနည်းသော ကာဗွန်အနိမ့်လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်စနစ်တွင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ လျှပ်ကာအလွှာ၊ ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်နှင့် အချောထည်အလွှာတို့ ပါဝင်သည်။ပါဝါရင်းမြစ်သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ဝါယာကြိုးမှတစ်ဆင့် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် သန့်စင်သောခံနိုင်ရည်ရှိသောပတ်လမ်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်း၏ပြောင်းလဲခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်သည် မြင့်မားသည်။ဆုံးရှုံးမှု၏ သေးငယ်သော အစိတ်အပိုင်း (2%) မှလွဲ၍ အများစု (98%) ကို အပူစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပါသည်။
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို မြေပြင်တောက်ပသောအပူပေးရန်အတွက် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်သည့်အပြင် အသုံးပြုမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အသက်ရှည်ကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသော PVC ဖုန်စုပ်စာအိတ် (ဘယ်ဘက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပူပေးစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ရုပ်ရှင်များသည် ထွန်းသစ်စလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကာဗွန်နည်းသော စီးပွားရေးတည်ဆောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေးအခြေအနေတွင် အိမ်ရာနှင့်မြို့ပြ-ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနသည် Harbin Institute of Technology နှင့် Heilongjiang Zhonghui Co., Ltd. တို့ ပူးပေါင်း၍ "နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြုစုရန် မကြာသေးမီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်များ လျှောက်ထားခြင်း" ကို ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အရည်အချင်းစစ်ဌာနမှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေဖြင့် "Low Temperature Radiant Electric Heating Film" ထုတ်ကုန်စံနှုန်းဖြင့် ၎င်းသည် ထုတ်ကုန်များ၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ အပြည့်အစုံကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပြီး လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ထုတ်ကုန်များ ပိုမိုဝင်ရောက်နိုင်ရန် အခြေအနေများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ နေထိုင်ရာ။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်နှင့် အသုံးချမုဒ်အရ၊ ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ရုပ်ရှင်များကို အောက်ပါ အမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်-
(1) လျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင် - ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်၏ပထမမျိုးဆက်၊ ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ချထားသော၊
(2) လျှပ်စစ်အပူပေးနံရံရုပ်ရှင်- ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်၏ဒုတိယမျိုးဆက်၊ နံရံပေါ်တွင်ချထားသော၊
(၃) လျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်- တတိယမျိုးဆက် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်၊ မြေပြင်ပေါ်တွင် ချထားသည်။ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်များ၏ ယခင်မျိုးဆက်နှစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက တတိယမျိုးဆက် ကာဗွန်နည်း လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် ရုပ်ရှင်များသည် ရိုးရှင်းသော ဆောက်လုပ်ရေး၊ တူညီသော အပူပေးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု (ခြေထောက်များ ပူနွေးပြီး ဦးခေါင်းအေးခြင်းကဲ့သို့ ထူးခြားသော အားသာချက်များရှိသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည်)။
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်အပူပေးစနစ်တွင်- ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်၊ T-type ကေဘယ်၊ လျှပ်ကာနှင့်ရေစိုခံအမြန်ပလပ်၊ အပူထိန်းကိရိယာနှင့် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတို့ ပါဝင်သည်။
(၁) ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဒိုင်ယာဖရမ်
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဒိုင်ယာဖရမ်သည် စနစ်တစ်ခုလုံး၏အဓိကဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး ဤစနစ်၏အပူပေးသည့်ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။၎င်း၏အခြေခံပစ္စည်းမှာ PET အထူး polyester ဖလင်ဖြစ်ပြီး အပူဒြပ်စင်သည် အထူးလျှပ်ကူးမှင်ဖြစ်ပြီး၊ ငွေငါးပိနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်သောသတ္တုဘတ်စ်ဘားဘားတို့ကို လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအဖြစ် အသုံးပြုကာ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကို အပူဖြင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးရုပ်ရှင်သည် အပူချိန်နိမ့်သော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်သည့်ပုံစံဖြင့် အပူကိုထုတ်လွှတ်သည်။၎င်းသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် အခန်းထဲသို့ အပူစွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး လွှဲပြောင်းပေးသည်။
(2) T-type ကြိုး၊ လျှပ်ကာနှင့် ရေစိုခံ အမြန်ပလပ်
T-type ကေဘယ်သည် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်အား ပါဝါပေးကာ ဆားကစ်တစ်ခုလုံးအတွက် ကွင်းပတ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းသည်။ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်အပူပေးစနစ်၏ ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ဖြင့် လျှပ်ကာနှင့် ရေစိုခံအမြန်ပလပ်သည် ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
(၃) အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာနှင့် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်အပူပေးစနစ်တစ်ခုလုံးကို အိမ်တွင်းအပူချိန်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန် ထိန်းချုပ်ပါ။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် ပျက်စီးမှုမရှိဘဲ စမ်းသပ်ဗို့အား 3750v သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို အထူးပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ကောင်းမွန်သောဝိသေသလက္ခဏာများ၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သော၊ ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမရှိသော၊ တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အဆောက်အဦနှင့် သက်တမ်းတူညီသည်။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် ရေစိုခံသည်။၄၈ နာရီကြာ ရေတွင် နှစ်မြှုပ်ပြီးနောက် 3750V အထက် ဗို့အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည် ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းကို စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ချိတ်ဆက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် ဖြတ်တောက်သည့်အပိုင်း၏ insulation နှင့် ရေစိုခံကုသမှုကို အာရုံစိုက်သင့်သည်။
စမ်းသပ်မှုအရ ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ ဆန့်နိုင်အားသည် 20 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။
2100 နာရီ၏အိုမင်းခြင်းစမ်းသပ်မှုတွင်၊ ကျုံ့နှုန်းသည် 2% ထက်နည်းသည်။
စမ်းသပ်ပြီးနောက်၊ မျက်နှာပြင်အပူချိန် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ နာရီ 26,000 ဆက်တိုက်လည်ပတ်ပြီးနောက် ကာဗွန်နည်းလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရွယ်အစားမှာ မပြောင်းလဲပါ။
အဆင့်မြင့်အပူအလုံပိတ်နည်းပညာသည် အမြှေးပါးများကို ပူဖောင်းများနှင့် အလွှာများမပါဘဲ ရာနှုန်းပြည့်ပိုလီမာဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးကာ အပူဒြပ်စင်နှင့် လက်ရှိသယ်ဆောင်နေသောဘား၏ အနီးကပ်ပေါင်းစပ်မှုကို သေချာစေသည်။
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူဖလင်သည် -20 ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။℃စာ-၈၀℃.စမ်းသပ်ပြီးနောက်- ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို -20 ဝန်းကျင်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲကွေးပြီး ဆန့်သည်°C နှင့် ကွဲအက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်မရှိပါ၊ ၎င်းသည် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။၎င်း၏ ပျော့ပျောင်းပြီး တာရှည်ခံသော စွမ်းဆောင်ရည် မရှိပါ။
ဓာတ်ပြုပြီးနောက် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် 40°C မှ 50°C ထက် မကျော်လွန်ဘဲ အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ယိုစိမ့်ခြင်း မရှိပါ။
တောက်ပသော အပူပေးစီးရီး ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံတော် အာဏာပိုင်မှ အနီအောက်ရောင်ခြည် အသုံးချ ကျွမ်းကျင်သူများက စမ်းသပ်ထားသည်။လှိုင်းအလျားမှာ 8.97 microns ဖြစ်သည်။၎င်းသည် လူ့ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုသည့် အနီအောက်ရောင်ခြည် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များက "ဘဝအလင်းလှိုင်း" ဟုခေါ်သည်။၎င်းကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး သွေးကြောမျှင်များကို ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ သွေးလည်ပတ်မှုနှင့် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တစ်ရှူးဆဲလ်များကို တက်ကြွစေခြင်း၊ လူ၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အကျိုးရှိသည်။
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ လည်ပတ်နေတာ နှစ် 30 ကျော်ရှိပါပြီ။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ မပျက်စီးပါက ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမှာ နှစ် 30 ထက် ပိုရှည်ပြီး စမ်းသပ်မှုသက်တမ်းမှာ အဆောက်အအုံနှင့် တူညီသော သက်တမ်း နှစ် 50 ကျော်ဖြစ်သည်။
ကာဗွန်နည်းသော ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်၏ လက္ခဏာများ
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် လူအားလုံးအတွက် ကာဗွန်နည်းသော အပူပေးခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်း၏ ကာဗွန်နည်းသောလက္ခဏာများသည် တိုက်ရိုက်စွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုထုတ်လွှတ်မှု၊ လူသားတို့၏နေထိုင်မှုနှင့် လူမှုရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင် အဓိကအားဖြင့် ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်။အတိအကျ-
(၁) ကာဗွန်နည်းသော စွမ်းအင်- သန့်ရှင်းပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အပူစွမ်းအင်
ကျောက်မီးသွေး၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ကောက်ရိုး၊ သစ်၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အမြင့်မားဆုံးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာရှိသည့် အပူစွမ်းအင်အဖြစ် နေစွမ်းအင်၊ လေစွမ်းအင်၊ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့် နျူကလီးယားစွမ်းအင်တို့မှ ကိုယ်စားပြုသော စွမ်းအင်အသစ်များ ထွန်းကားလာသဖြင့် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ထွန်းကားလာပါသည်။ .စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အသစ်မှ ပံ့ပိုးပေးသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သည် သန့်ရှင်းပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အမှန်တကယ် ကာဗွန်နည်းသော သို့မဟုတ် "သုည" ကာဗွန်စွမ်းအင်ပင် ဖြစ်သည်။
(2) ကာဗွန်နည်းသော ပြောင်းလဲခြင်း- အပူအတွက် မြင့်မားသော အပူကူးပြောင်းမှု ထိရောက်မှု
သမားရိုးကျ အပူပေးနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်၏ အပူကူးပြောင်းမှုနှုန်းသည် 98.68% အထိ မြင့်မားနေပြီး ကူးပြောင်းခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုကို များစွာလျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
(၃) ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု နည်းပါးခြင်း- စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြားသော ညစ်ညမ်းမှု လုံးဝကင်းစင်ခြင်း။
ရိုးရာအပူပေးနည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူစွမ်းအင်အဖြစ် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် ဘွိုင်လာခန်းများ၊ ကျောက်မီးသွေးသိုလှောင်မှု၊ ပြာပုံများ၊ ပိုက်လိုင်းများနှင့် အခြားသော အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ၊ မြေကို သက်သာစေပြီး စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့၊ ရေဆိုး၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ အခြားညစ်ညမ်းမှုများ၊ ထို့ကြောင့် စွန့်ပစ်ဓာတ်ငွေ့နှင့် အခြားညစ်ညမ်းမှုများကို ရိုးရှင်းစွာထုတ်လွှတ်ရန်။သုညသို့ချပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကျောက်မီးသွေးကို ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန်အတွက် စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်အဖြစ် အသုံးပြုသော်လည်း ကျောက်မီးသွေးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အတိုင်းအတာနှင့် ပြင်းထန်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလအတွင်း စွမ်းအင်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် မော်တော်ယာဥ်ညစ်ညမ်းမှုကို သက်သာစေကာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ကာဗွန်နည်းသောစွမ်းအင်သုံးမှုကို အားကောင်းစေသည်။
(4) ကာဗွန်နည်းသောအသက်တာ- ergonomic ဒီဇိုင်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော
ရေတိုင်ကီများ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ ရေတိုင်ကီများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် ပွိုင့်အပူပေးစနစ်များနှင့် အပူပေးကေဘယ်ကြိုးများဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် ဝါယာကြိုးအပူပေးစနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် ရုပ်ရှင်အပူပေးစနစ် မျိုးဆက်သစ်သည် လျှပ်စစ် mulch ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည့် အပူပေးစနစ်များသည် လှုပ်ရှားမှုနေရာရှိ လူများအတွက် အလွန်သင့်လျော်ပါသည်။နွေးထွေးသော ခြေဖဝါးများနှင့် အေးမြသော ဦးခေါင်းများအတွက် နေထိုင်နိုင်သော လိုအပ်ချက်။အတိအကျအားဖြင့်- ဤထူးခြားသော အပူပေးနည်းလမ်းသည် အိမ်တွင်းအပူချိန်သည် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်ပြီး လတ်ဆတ်သော၊ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး တိတ်ဆိတ်နေပြီး ရိုးရာအပူပေးခြင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ခြောက်သွေ့မှုနှင့် ဆားစပ်သောအပူမရှိကြောင်း၊ ၎င်းသည် လေ၀င်လေထွက်ကြောင့် အိမ်တွင်းဖုန်မှုန့်များကို လွင့်စေမည်မဟုတ်ပါ။လျှပ်စစ်အပူပေးထားသော mulch သည် အိမ်တွင်းလေကို အပူပေးရုံသာမက စနစ်မှထုတ်လွှတ်သော အဝေးမှ ထုတ်လွှတ်သော အနီအောက်ရောင်ခြည် အပြင်ဘက်လှိုင်းတွင်လည်း ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို ထိန်းညှိပေးပြီး လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှောင့်နှေးစေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပါဝင်သည်။အောက်ခြေမှ အပူပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ခြေထောက်နှင့် ဦးခေါင်းများကို ပူနွေးစေခြင်းဖြင့် လူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နိယာမနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ထို့အပြင် အသိဉာဏ်ရှိသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်သည် လူများကို နွေးထွေးစေရန်၊ စွမ်းအင်ချွေတာသည့်အပြုအမူကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လူသားဆန်သော ကာဗွန်နည်းသော မျိုးဆက်သစ်ကို စတင်နိုင်စေပါသည်။
(၅) ကာဗွန်နည်းသောစီးပွားရေး- စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အဆင့်နိမ့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သုံးစွဲမှုနှင့် ဝင်ငွေထုတ်လုပ်နိုင်မှုတို့ကို အားကြိုးမာန်တက် မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်များကို အသုံးပြုခြင်းသည် အဆောက်အဦ စွမ်းအင်ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် အခြေခံသည်။ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ဤအပူပေးနည်းလမ်းအသစ်၏ ပြင်းထန်သောမြှင့်တင်ရေးနှင့် လူတိုင်းအသုံးပြုမှုသည် နိုင်ငံတော်ပြဌာန်းထားသော စွမ်းအင်ထိရောက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများ၏ 65% ကို တင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို တိုက်ရိုက်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကာဗွန်နည်းသောအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် ပါဝါသုံးစွဲမှု ဟန်ချက်ညီမှု ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အမြင့်ဆုံး ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုနှင့် ညဘက်ပါဝါသုံးစွဲမှုကြား ကွာဟချက်ကြီးမားပြီး ညဘက်အား ဖြုန်းတီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ကျင်းလျှပ်စစ်ကို အပြည့်အဝအသုံးပြုခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက် တွင်းလျှပ်စစ်ဝင်ငွေကို တိုးစေရုံသာမက ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်၊ လျှပ်စစ်စျေးနှုန်းတည်ငြိမ်စေကာ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်ကာ ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်၏ ဘေးကင်းမှု
ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် လုံခြုံမှုအန္တရာယ်မရှိဘဲ အလွန်လုံခြုံပြီး အလွန်ရင့်ကျက်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ စစ်ဆေးပြီးနောက် ၎င်း၏ insulation grade၊ pressure resistance, leakage current, and flame retardancy များအားလုံးသည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်စံနှုန်းသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။အသုံးပြုသူများ စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
1. ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ပြိုကွဲဗို့အားသည် 1200V အထက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် 220V တွင်လည်ပတ်သောအခါပြိုကွဲမည့်အန္တရာယ်မရှိပါ။
2. ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ ယိုစိမ့်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ကြားနေလိုင်းတွင် 0.126mA ထက်နည်းပါသည်။အဆင့်လိုင်းသည် 0.136mA ထက်နည်းသည်။
3. ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် မီးမလောင်ဘဲ ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်ကို အလိုအလျောက်လောင်ကျွမ်းစေမည်မဟုတ်ပါ။
4. ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် အပူချိန်နိမ့်သောအလင်းရောင်အပူပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 40-50°C သာရှိသည်။
5. ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်အပူပေးစနစ်တွင် အပူချိန်ထိန်းကိရိယာပါရှိသည်။အပူချိန်ထိန်းကိရိယာသည် စနစ်တစ်ခုလုံးကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မည်ဖြစ်သည်။အိမ်တွင်းအပူချိန်သည် သုံးစွဲသူ၏လိုအပ်ချက်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်အပူပေးစနစ်တစ်ခုလုံးသည် လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားပါသည်။အိမ်တွင်းအပူချိန်သည် အသုံးပြုသူ၏ တောင်းဆိုမှုထက် နိမ့်သောအခါ၊ ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်စနစ်တစ်ခုလုံး အလိုအလျောက် စတင်လည်ပတ်ပါသည်။
အဆောက်အဦများလူနေရပ်ကွက်များ၊ ဟိုတယ်များ၊ ရုံးခန်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ အိမ်ကြီးများ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် တိုက်ခန်းများ၊ သူငယ်တန်း၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ...
စက်မှု-tank insulation၊ ပိုက်လိုင်းအပူခြေရာခံခြင်း၊ ဂိုဒေါင်များ၊ စက်မှုစက်ရုံများ...
စိုက်ပျိုးရေးဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖန်လုံအိမ်များ၊ ပန်းအိမ်များ၊ နွားသေတ္တာများ...
အိမ်ထောင်စု-မြူဆန့်ကျင်ရေးမှန်၊ လျှပ်စစ်အပူပေးပန်းချီ၊ လျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ခြေဖဝါးပြား၊ လျှပ်စစ်အပူပေးကန်၊ စာရေးစားပွဲခုံ...
※အိမ်တွင်းအပူချိန်ကို အခမဲ့ ထိန်းညှိပေးသည်။
ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင်သည် အခန်း၏အပူအပူချိန်နှင့် အချိန်ကာလတစ်ခုစီကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ စီစဉ်ရန် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အပူပေးစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။အသုံးမကျသောအပူကိုရှောင်နိုင်သည်၊ သို့မှသာလူများသည်ရေ၊ လျှပ်စစ်ကိုချွေတာနိုင်ပြီး၊ အဆင်ပြေစွာ "အပူချွေတာခြင်း" နှင့်ငွေကိုချွေတာနိုင်စေရန်။
※နေရောင်လို နွေးနွေးထွေးထွေး ကျန်းမာပါစေ။
အပူချိန်နည်းသော ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကြောင့် အပူရှိန်ကြောင့် လူများသည် နေပူထဲတွင် နွေးထွေးပြီး သက်တောင့်သက်သာ ခံစားရပြီး လေသည် လတ်ဆတ်သည်။ရိုးရာစံနစ်များဖြင့် ခြောက်သွေ့ပြီး ယားယံသောခံစားမှုမျိုး မရှိပါ။
မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ၊ ပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ရေတိုင်ကီများ၊ ဘွိုင်လာများနှင့် ပိုက်လိုင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် အိမ်တွင်းအသုံးပြုမှုဧရိယာ တိုးလာခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပါဝါသုံးစွဲမှု နည်းပါးသည်။အဆိုပါစနစ်ကို အလှဆင်အင်ဂျင်နီယာနှင့် တွဲဖက်၍ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ တပ်ဆင်နိုင်ပြီး အပူ၊ အလှတရားနှင့် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမှု နှစ်ခုစလုံးကို ရရှိနိုင်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်သည်။
※ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု မရှိပါ။
အပူချိန်သည် တစ်ပြေးညီဖြစ်ပြီး ညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ ဆူညံမှုမရှိခြင်း၊ မြို့ပြစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အခန်းတွင်း လေဝင်လေထွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖုန်မှုန့်များ မရှိပါ။
※အပူချိန်နိမ့်သောလုပ်ဆောင်ချက်၊ ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
စနစ်၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း 50°C ထက် မကျော်လွန်နိုင်သောကြောင့် မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုများ ဖြစ်မလာပါ။စနစ်တစ်ခုလုံးသည် အပြိုင်ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ လည်ပတ်ရာတွင် တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။
ဘွိုင်လာအပူပေးစနစ်နှင့် လေအေးပေးစက် အပူပေးစနစ်မှ ထုတ်ပေးသော အိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့ မရှိတော့ဘဲ သင့်အား ပြာလွင်သောကောင်းကင်ကို ယူဆောင်လာပေးသည်။
အပူအချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်မရွေးအပူခံနိုင်သောကြောင့် အအေးမိဆောင်းဦးနှင့် နွေဦးရာသီအအေးဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်သော တုပ်ကွေးနှင့် အဖျားကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေပါသည်။
ရေကိုစမ်းသပ်ရန်ပြဿနာမရှိပါ၊ ၎င်းသည်ကြမ်းပြင်၏ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ဘဝကိုပိုမိုသာယာစေသည်။
အပူချိန်နိမ့် တောက်ပသော ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးဖလင် ထုတ်ကုန်များ၏ နည်းပညာမြင့် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အလုံးစုံ အပူပေးစနစ်၏ အားသာချက်များသည် အိမ်၏ ရောင်းအားကို တိုးမြင့်စေပါသည်။အထပ်မြင့် သို့မဟုတ် တောင်ဘက်မျက်နှာစာ အခန်းများတွင် နွေးထွေးမှု နှင့် အနိမ့်ပိုင်း သို့မဟုတ် အရိပ်ရသော အခန်းများတွင် အေးခဲနေခြင်းမျိုး မရှိတော့ပါ။
※ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ အသုံးပြုခြင်း။
ပထမဦးစွာ၊ ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်ရုပ်ရှင်အပူပေးစနစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လည်း အယူအဆများပြောင်းလဲခြင်းတွင် ပြဿနာတစ်ခုရှိသည်။လက်ရှိ ရိုးရာအပူပေးနည်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်ထားသော အပူပေးနည်းလမ်းဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသည် စရိတ်စကကို ပေးဆောင်ပြီး နေထိုင်သူများသည် ကြီးမားသော စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ကုန်ကျစရိတ်မဟုတ်ဘဲ အပူနှင့် အအေးကိုသာ အာရုံစိုက်ကြသည်။သို့သော် ကာဗွန်နည်းသော လျှပ်စစ်အပူပေးသည့် ရုပ်ရှင်အပူပေးစနစ်၊ အပူချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့သည် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် သုံးစွဲသူများသည် အပူချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို ဂရုစိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန် မှန်ကန်သောအပူချိန်နှင့် အပူပေးချိန်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်၏ သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံး အပူချိန်မှာ ယေဘူယျအားဖြင့် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိပြီး အချို့သောလူများသည် အပူချိန်မြင့်မားရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး အပူချိန်တိုင်းသည် ဒီဂရီတစ်ခုတိုးလာကာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု 5% တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။အိမ်တွင်းစနစ် အပူချိန် မြင့်မားနေပါက အအေးမိခြင်းနှင့် အခြားရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူသည်။ထို့ကြောင့် မှန်ကန်သော အပူချိန်ကို ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း အယူအဆကို မွမ်းမံရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယ၊ လိုအပ်သလို အချိန်မရွေး အပူပေးစနစ် ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိပါ၊ ကုန်ကျစရိတ်ကို ထိထိရောက်ရောက် သက်သာစေနိုင်သည်။ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် အဆင်ပြေသောဆက်တင်တစ်ခုရှိပြီး စနစ်အား သီးခြားအခန်းများဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်။အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်အရ အပူပေးစနစ်ကို လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။အလင်းရောင်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်မီးကို ချွေတာခြင်းကဲ့သို့ အပူအတွက် လျှပ်စစ်ကို ချွေတာပါ။ထို့အပြင်၊ ကာဗွန်နည်းသောလျှပ်စစ်ဖလင်အပူပေးစနစ်သည် သုံးစွဲသူ၏ဘဝစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး စွမ်းအင်ကို ထိရောက်စွာချွေတာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ယခင်- EMS Massager (IPAD အရုပ်လိုင်း)
နောက်တစ်ခု: PET အပူပေးရုပ်ရှင် (Flexible PCB)